HIV / AIDSနဲ့ မြွေဟောက်တစ်ကောင်ရဲ့ ပက်သတ်မှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » HIV / AIDSနဲ့ မြွေဟောက်တစ်ကောင်ရဲ့ ပက်သတ်မှု
HIV / AIDSနဲ့ မြွေဟောက်တစ်ကောင်ရဲ့ ပက်သတ်မှု
Posted by cobra on Sep 2, 2011 in Creative Writing | 15 comments
ကျွန်တော်ဒီပိုစ့်ကိုတင်တာကတော့ အဖော်စောင်ထားစို့ နဲ့ ပက်သတ်ပြီး
သူ့နာမည်က ရဲမြတ်ခိုင် ကျွန်တော်ကတော့ အကိုကြီးကိုရဲလို့ခေါ်တယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးကလွဲရင်ကျန်တာမလုပ်ဖူးတာမရှိစေနဲ့ဒါပေမယ့်
HIV/AIDS တဲ့ သူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ကိုအရင်ပြောပြတယ်။
သူ့ တိုက်ကကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ မျက်စောင်းထိုးမှာရှိတယ်။၀ရံတာထွက်ပြီးဂစ်တာတီးတာခုထိမျက်လုံးထဲမြင်နေတုန်းပဲ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အကိုကြီးကိုရဲသေကတည်းက HIV/AIDS နဲ့ပက်သတ်တဲ့စာတွေ
အကြံပေးစာအုပ်တွေ ကူညီမှုဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ လေ့လာခဲ့တယ်။
ခုမှ ဇတ်ရည်လည်ပါတော့တယ်… စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ… အဲလိုရှင်းပြတော့လဲ အားလုံး သိကြရတာပေါ့..
ကျနော်လဲ ပထမတော့ တစ်မျိုးထင်နေတာ… တောင်းပန်ပါတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေ ကြားမှာတော့ ဒီ လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ကွန်ဒုံးဆိုတာကြီးက မကောင်းဘူးလို့ ခံယူထားကြတာကိုး… ဒီအကြောင်းတွေကို ဒီလိုရေး ဒီလိုပြောနေတဲ့လူက ဆရာဝန် (သို့) ဆေးပညာဝန်ထမ်း မဟုတ်တဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်ဆိုရင် မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းက အဲ့ဒီလူကို တစ်မျိုးထင်တတ်ကြတာ ထုံးစံပါပဲ… စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ… ဆက်သာရေးပါ… ကျွန်တော်အားပေးနေပါတယ်
ဒီ ပို့စ်ကို အရင်တင်ခဲ့ ရင် ကောင်း မှာ ဗျာ…………..
အခုတော့ …..အရင် ပို့စ်တွေမှာ….. ကာမ ကိစ္စတွေ အကြောင်းတွေအထပ်ထပ်အခါခါရေးခဲ့ …….စာအရေးအသားလဲကြမ်းခဲ့တော့……ရည်ရွယ်ချက်လမ်းကြောင်း………..မတဲ့တော့ဘူးပေါ့….MG မှာမိန်းကလေးတွေလဲရှိတော့..တစ်မျိုးထင်ကုန်ကြတာပါ…………..
ဒီလိုပါဘဲ ဆေးလိပ် အရက် ကွမ်းယာ ဒါတွေလဲမသောက်မစားတတ်ယင်
တို့တတွေ မကောင်းမှန်းသိရက်နဲ့ဆေးလိပ် ကွမ်းယာ စွဲနေတယ်
ဖြတ်ယင်လဲ ခဏဘဲ ပြန်သောက် ပြန်စားနေမိတယ်
ဘယ်လိုကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အေ့စ်ရောဂါက ကုဖို့ ဆေးမရှိသေးလေတော့။အားလုံးဆင်ခြင်ကြရင်ကောင်းတာပေါ့။ သူ့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်ရှင်။
ကောင်းပါတယ်ဗျာ ။ သတင်းတွေလဲဖတ်ရင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေ လဲ ရတာပေါ့
မြွေဟောက်တစ်ကောင်နဲ့ ပတ်သက်မှုဆိုတာ cobra ရေ ဘယ်သူ့ ကိုပြန်ဖြေရှင်းတာလဲ ။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
cobra ရဲ့မိဘတွေကို lone ရည်ရွယ်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုပထမစာမှာထဲကပြောပြပြီးသွားပြီနော်။ လူကြီးလူကောင်းပီသစွာနားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေ သားသမီးတွေဘက်ကစာနာနားလည်ပေးစေချင်တာကိုပဲ ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ နောက်တစ်ခါပညာပေးရေးချင်ရင်တော့ ယောက်ျားတွေဘက်က အားပေး
အားမြှောက်ပြုသလိုမရေးဘဲ အားလုံးနားလည်အောင် ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးမျှတစွာရေးပေးပါ။…lone ကမကောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုယောက်ျားတွေကို ကြည့်မရတာပါ။ ….
ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တင်ပေးတဲ့ cobra ကို ချီးကျူးပါတယ်…
HIV ..AIDS..ရောဂါတွေဟာကုရာနထိဆေးမရှိဆိုတာ သိထားကြပေမယ့် တချို့က လိုက်နာမှုအားနည်း နေသေးတယ်လေ…
ဒီတော့ ပညာပေးလေးတွေကို ဆက်လက် ရေးစေလိုပါတယ်… အားပေးပါတယ်…
လိင်ကိစ္စရေးအသားလေးတွေ ဖိုမ ကိစ္စရေးအသားလေးတွေ ကိုတော့ ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါတယ်…. ပညာပေးပို့စ်တစ်ခုထက် အပြာပို့စ် တစ်ခုအဖြစ် သူများတွေ မြင်သွားမှာကိုတော့ မလိုချင်ပါဘူး….
cobra ရေ … အခုခေတ်လူငယ်တွေ … ကြားဖူးနားဝ ရှိနေသေးတာတောင် … တကယ်လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့ ခက်ခဲနေကြတာ ၊ ရောဂါပြန့်ပွားမှူ နှုန်း မြင့်မားနေသေးတာ … ဘာကြောင့်များပါလိမ့် … ။
အရင်ကထက် သတိပေးကြော်ငြာတွေ ပြန့်နှံ့နေပါလျှက် … တဒင်္ဂစိတ်လေးကို မပိုင်းခြားတတ်တော့ … ရုန်းရင်း နစ်နေကြရတာပါ ပဲ… ။
ကိုဘရာနဲ့ လုံးတို့နှစ်ယောက် တနေရာရာမှာ လူခြင်းချိန်းတွေ့ပြီး ရေးထားမန်းထားတာတွေကို ရှင်းလိုက်ကြပါလား၊ ပြီးရင် စိတ်ပြေလက်ပျောက် ရုပ်ရှင်လေးဘာလေး သွားကြည့်ကြပေါ့။ တကယ်ပြောတာနော်၊ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဘေးဘီဝဲယာ ကြည့်ကြအုံး။ ရွာထဲက အီးဒုံးလူမိုက်ကြီးက ရိုက်ရင် အသံမထွက်အောင် ရိုက်တတ်တယ်ဆိုလား ပြောသံကြားတယ်..။